Home News Daacish iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay gobolka Bari!!
Dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ayaa wali ka socda degaanka Ceelka Miraale oo qiyaastii 70KM u jira magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland.
Sida ay xaqiijiyeen dadka degaanka Xalay rasaas goos goos ah ayaa ka socotay degaankaasi iyo waliba degaano oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaallamayeen Al-Shabaab iyo Daacish.
Dadka degaanka ayaa sheegay in ay maqlayan dhawaaqa rasaas socota oo labada dhinac ay is-waydaarsanayeen, inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna aan ishoodu qaban.
Al-Shabaab ayaa isku dayaya in Kooxda Daacish ay kala wareeggaan Awoodda degaanada Buuraleyda ah ee ku yaalla gobolka Bari ee maamulka Puntland.
18-kii bishii December ee sanadkii 2018, ayey ahayd markii Al-Shabaab iyo Daacish uu dagaal ku dhex-maray meel aan ka fogayn dhulkan buralayda gobolka Bari ah ee uu daagalku ka dhacay, kadib markii dagaalyahano Al-Shabaab ka mid ah ay ka tageen dhinaca buuraha Galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin, iyagoo duulaan ku ah fariisimaha Daacish ay ku leeyihiin buuraha gobolka Bari.
Maamulka Puntland ayaan weli ka hadlin dagaaladan la sheegay in ay u dhexeeyaan Al-Shabaab iyo Daacish. Sidoo kale, Daacish iyo Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka, lamana oga sababta dhabta ah ee ka dambeysa dagaalka.